ग्याष्टिक रोग भनेको के हो? किन र कसरी हुन्छ यो ग्याष्टिक रोग?:: जानकारी – धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
ग्याष्टिक रोग भनेको के हो? किन र कसरी हुन्छ यो ग्याष्टिक रोग?:: जानकारी
प्रकाशित मिति: २५ मंसिर २०७१, बिहीबार २१:१७
नेपालीहरुलाई चिनाउने रोगको रुपमा ग्याष्टिक रोग परिचित छ। नेपाली नागरिकता नै ग्याष्टिक रोग भए
नभएको अनुसार दिनुपर्छ भनेर ठट्टा गरेर भन्ने गरेको पनि पाइन्छ। आज म यहि ग्याष्टिक रोगको बारेमा वृस्तितमा कुरा गर्न गइरहेको छु।
२५ मंसिर २०७१, बिहीबार २१:१७ मा प्रकाशित